TikTok inoputira YouTube nevana | IPhone nhau
Mugari wenhaka Mumhanzi kwakadyara kupenga kwechokwadi pakati pevadiki. Idzo mhando dzetsika idzo dzatotanga kuita sedzisinganzwisisike kune avo vedu vasingagovane nadzo, sekungogara tichitamba pamberi penharembozha.
Ndiani asina kumboona madiki madiki evana vachitamba kana kutamba pamberi peserura munzira yepasi pevhu, mumugwagwa uye chero kupi kwaungafungidzira? Zvinotaridza kuti izvi ndizvo zviri TikTok, vane nguva yakanaka uye mhedzisiro iri kutanga kunetsekana YouTube. Zvinoenderana neazvino ongororo, vateereri vechidiki vachiri kushandisa ese TikTok neYouTube, Kubudirira kukuru kwakakohwa TikTok kwakakodzera here?
Kana zvakandiomera kuti ndinzwisise zvimwe zvinhu zvinoitika mukati me Instagram, izvo zvandakaona zvakazvarwa seSocial Network kwataigovana mifananidzo yehunyanzvi pasina kunyepedzera, uye pasina kana chasara. Iye zvino TikTok yasvika mushure mebasa hombe rekuvandudza, kugadziridza uye pamusoro pevateereri vakavimbika vakapindwa muropa nezvakanyorwa zvakagadzirwa nevanokurudzira mafashoni senge mafaro @twinmelody, @ jordi.koalitic, pablobrotonss kana @amarmolmc pakati pevamwe vakawanda. Asi uyu hausi ikozvino mubvunzo, gakava rava kusimuka pakati peYouTube neTikTok, iyo data inonyevera Google (muridzi weYouTube) nezve iye Chinese mugadziri.
Zvinoenderana ne kudzidza inoitwa kumhuri dzinopfuura makumi matanhatu nemakumi matatu nechishandiswa chekudzivirira kwevabereki cheQustodio, TikTok yakakura kubva pamaminetsi makumi maviri nemana pazuva iyo vashandisi vari pakati pemakore mana kusvika gumi nemashanu ekuberekwa muSpain, United Kingdom neUnited States vakazvipira kwazviri, ikozvino vanozvipira avhareji yemaminetsi makumi matanhatu pazuva gore rinotevera, maminetsi manomwe chete ezuva nezuva ekushandisa musiyano kubva kuYouTube, inomiririra iyo yakakosha kukura uye uchisiya mapuratifomu akaita se Instagram. MuSpain, vashandisi vanoramba vachida YouTube zvishoma, nepo kuUnited States nekuUnited Kingdom kushandiswa kweese masevhisi kwakatonyanya, Ko TikTok inogona kupedzisira yabvisa YouTube here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » TikTok inopfuura YouTube nevateereri vevana